जोगबनी बन्यो अपराधस्थल – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, २५ असार २०७८, शुक्रबार ०८:३०
विराटनगर / प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अरूणकुमार बिसीले १,नम्बर प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साता मात्रै बित्दैछ । यो समाचार आजको उद्घोष दैनिक पत्रिकाले छापेको छ ।
गत सोमबार प्रत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफनो कार्यकालका प्राथमिकताका कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गरेका छुन् । तर १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पुग नपुग एक किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने सीमा क्षेत्रको भारतीय बजार जोगरबनीमा बषौैदेखि जरा गाडेर बसेको अपराधको जालोलाई प्रहरीले तोड्न सकेको छैन ।
जोगबनी बजार लागुऔषध,तास आदिको मुख्य अखडा हो । जोगबनीमा लागुऔषध सेवन गर्न जानेहरू विहानैदेखि रानी नाकामा लाइन लाग्ने गर्दछन् । सशस्त्र प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट जोगबनी लागुपद्वार्थ सेवन गर्न जानेहरूमा स्कूल र कलेजका विद्यार्थीका अलावा शिक्षक र डाक्टरहरू पनि रहेको पाइएको छ ।
लामो लकडाउन र बेरोजगारीको समस्याले लागपदार्थ सेवन गर्नेहरूको संख्या बढाएको छ । जोगबनीमा दशकौंदेखि चल्दै आएको जूवाको अखडामा पनि नेपाली खेलाडीहरू नै जाने गर्दछन् । कोरोना संक्रमण बढेसँगै भएको नाकाबन्दीले गर्दा जोगबनी बजारको ब्यापार व्यवसाय सकेको छ ।
कतिपय रेडिमेड पसल र अन्य केही पसलहरू १५ महिनादेखि बन्द छन् । तर अवैध धन्दा भनै मौलाएकै छ । अवैध धन्दा मौलाएको छ भन्ने पुष्टि गत बुधबार जोगबनी थानाले जोगबनीको वडा नं. ९ अन्तर्गत इन्द्रानगरमा गरेको छापामारी र त्यहाँ फेला परेको अवैध
हतियार एवं लागुपदार्थले गर्दछ ।
जोगबनी थानाध्यक्ष आफताब अहमद, र एसएसबी जोगबनीका रमेश याखहोमले संयुक्त रूपमा इन्द्रानगरमा छापामारी गरी एक थान देशी पेस्तोल, दुई थान कारतुस, गाजा आदि बरामद गरेको थियो । छापामारीका क्रममा सो ठाउँका सञ्जीत मण्डल नामको एक कारोबारीलाई पक्राउ गरेको थियो । नेपालसँग सीमा जोडिएको सो बस्ती लागऔषध, अवैध हातहतियार आदि कारोबार हुने ठाउँको रूपमा चिनिन्छ ।
मुख्य नायिके रञजति मण्डललाई भने पक्राउ गर्न सकेको छैन् । मण्डलको घरबाट ३३ बोतल मादक पदार्थ पनि बरामद भएको थियो । सो, घटनाले पनि जोगबनी अपराधस्थलका रूपमा विकसित हुँदै गएको पुष्टि गर्दछ । जोगबनी १ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका पहाडी जिल्लाबाट पनि लागुपदार्थ सेवन गर्न आउनेहरूको अखडा हो ।
प्रहरीले पूरै नाकाबन्दी गरेर जोगबनीबाट हुने लागुऔषधको कारोबारलाई रौक्ने हो भने १ नम्बर प्रदेशको लागुु औषधको आधा कारोबार घट्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
Malai yo padher dherai dherai n ramro lagiyo kinvane school r clz ko student r dr aru pani asto lagu pradat ko paxadi lageko suner dherai n ramro malai lagiyo
Aadil khan लेख्नुहुन्छ
Ekdam sahi kura ho jogbani nashedi bhiti haru ko aada ho
Nepali kta haru eta bata teta jana kasaile rokna sakdaina aba. Boru sakincha vane naya user harulai rokum. Purano lai khulla xoddim dukha nadim